Five Precepts of Buddhist Myanmar Military မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Useful Idiots = Westerners duped into saying good things about bad regimes like present Myanmar Government
Al Jazeera : The Hidden Genocide »
Five Precepts of Buddhist Myanmar Military မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
From Wikipedia>>>The Five Precepts (Pali: pañca-sīlāni; Sanskrit: pañca-śīlāni) constitute the basic Buddhist code of ethics, undertaken by lay followers (Upāsaka and Upāsikā) of the Buddha Gautama in the Theravada as well as in Mahayana traditions. The precepts in both traditions are essentially identical and are commitments to abstain from harming living beings, stealing, sexual misconduct, lying and intoxication. Undertaking the five precepts is part of both lay Buddhist initiation and regular lay Buddhist devotional practices.
They are not formulated as imperatives, but as training rules that laypeople undertake voluntarily to facilitate practice.
The following are the five precepts (pañca-sikkhāpada) or five virtues (pañca-sīla) rendered in English and Pali:
1. I undertake the training rule to abstain from taking life. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
2. I undertake the training rule to abstain from taking what is not given. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
3. I undertake the training rule to abstain from sexual misconduct. Kāmesumicchācāra veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
4. I undertake the training rule to abstain from false speech. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
5. I undertake the training rule to abstain from fermented drink that causes heedlessness. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Tags: Buddha Gautama, Buddhism, Five Precepts, Mahayana, Muslim, Sanskrit, Theravada, Wikipedia
This entry was posted on December 8, 2012 at 2:22 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Five Precepts of Buddhist Myanmar Military မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ”
December 12, 2012 at 12:31 pm | Reply
FB of Aye Chan Mon
မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်သံများ၊ သာသနာ့အလံ တလူလူလွင့်နေမှုများနှင့် ရွှေဝါရောင် သင်္ကန်းတို့ တဖျတ်ဖျတ် ရိုက်ခတ်သံများကို ကြားဖူးသည်။ အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားလိုက်နာဖို့ တောင်းဆိုသံများသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသည်မှာ တစ်ခုတည်း။ ၂၀၀၇နှင့် ၂၀၁၂။ ၂၀၀၇တုန်းက ပြည်သူများသည် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး သံဃာတော်များကို ရှိခိုးဦးတင်ကာ ငိုချင်းချခဲ့ဖူးသည်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒလေးစားလိုက်နာရန် မိုးထဲလေထဲ မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်နေသောသံဃာများကို အကြမ်းဖက်အင်အားသုံးက ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၇နှင့် ၂၀၁၂သာ ကွာသည်။ ၁၂တွင် တောင်းဆိုနေသည်မှာလည်း အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒ လေးစားလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆန္ဒပြမှုကို ရှုတ်ချသော အင်အားစုကြီးသည် သိသိသာသာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ အတော်ပင် ထူးဆန်းသည်။ ၂၀၀၇နှင့် ၂၀၁၂ကွာခြားချက်မှာ တစ်ခုသာရှိသည်။ စစ်အစိုးရနှင့် အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှု။ သို့သော် ပြသနာများကို ကိုင်တွယ်ပုံမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့် တောင်းဆိုမှုများလည်း တူညီနေသည်။ သို့သော် ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ဆန္ဒပြမှုများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်ကာ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူများရှိသည် ဘာညာဖြင့် နှပ်ကြောင်းပေးလာသောအခါ ထူးဆန်းမှုကြီး ဖြစ်လာသည်။ ဒီမိုကရေစီကို ကိုယ်သန်ရာကိုယ်သန်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေကြသည်။
အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြမှုကိုတော့ အတော်ကြောက်နေပုံရပြီး အကြမ်းဖက် အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမည့် အင်အားစုကိုမူ မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်ကာ မကြည့်ရဲကြ။ စိတ်ဓာတ်တို့ ဖောက်ပြန်နေကြသည်။ သူတို့စိတ်ထင် သူတို့လိုချင်သော
ဒီမိုကရေစီ ရနေပြီဟု ထင်နေသည်။
အေးချမ်းမွန်မှ အဘ မင်းထက် စံ တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။